China Quality Auto akụkụ ahụ mapụtara, Die mgbatị ngwaahịa, Smart ngwa Price - Dongguan Yiwei nkenke hardware Products Co. LTD
Dongguan Yiwei nkenke Hardware Co., Ltd. e guzobere na 2010. Ebe ọ bụ na ya oruru, anyị mgbe niile ahịa-centric, n'ịgbaso niile na-eme, na n'ụzọ zuru ezu na-eju afọ ahịa mkpa. Site anyị na-aga n'ihu mgbalị, anyị kpụrụ a zuru ezu ulo oru yinye si ngwaahịa imewe na mmepe, ngwaahịa mmepụta ka ngwaahịa usoro mma na usoro nke ngwaike zinc-aluminum alloy anwụ-mgbatị, ọla kọpa-aluminom ngwaahịa ibe ya bụrụ, CNC machining, wdg ụlọ ọrụ nwere 5,000 tọn ngwá ọrụ na-arụ ọrụ, tọn 3,000 nke ihe eji arụ ọrụ, tọn 1,250 nke ngwongwo aluminom na-anwụ anwụ, tọn 280 nke ihe ndozi, na 88 nke aluminom alloy ịnwụ. 10 tent nke 850 / 650CNC, 3 tent nke anọ axis machining emmepe, 4 tent nke CNC lathes, 4 tent nke isi igwe, nke nwere ike izute mmepụta na mmepe nke ndị ahịa 'iche iche ngwaahịa; ọ nwere ike izute mmepe chọrọ nke ndị ahịa site na ngwaahịa dị mfe ma dị mgbagwoju anya. Na-etolite ubi, anyị ụlọ ọrụ nwere ike mmepe otu, na-ekwusi ike ogologo oge imekọ ihe ọnụ na miri emi nnyocha na ụlọ ọrụ ndị ọkachamara. Ọ nwere ahụmịhe zuru oke n'ọhịa nke ụgbọ ala ike ọhụrụ na nlekọta ahụike.